Siyaasadda lacag celinta - Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt Siyaasadda soo celinta - Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt
Soo Celinta Siyaasadda / Joojinta
Dhammaan soo celinta iyo beddellada waa inay ahaadaan kuwo aan la isticmaalin, baakidhkeedii asalka ahaa iyo dhammaan astaamaha wali ku lifaaqan. Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt ayaa bixin doona kharashka soo celinta.
Waxyaabaha Custom / Monogram gaar ah waa aan la soo celin karin oo aan la soo celin karin marka laga reebo haddii codsigu u sabab u yahay waxyeelada ka dhalanaysa inta rarku socdo. Ma oggolaan karno in la soo celiyo sheygan oo kale, maaddaama waxyaabaha gaarka / monogram-ka loo sameeyo si loo dalbado. Waxaan haysannaa waqti iyo ilo horeyba loogu qoondeeyay in aan shey ka shaqeyno laga bilaabo waqtiga amarka la bixiyo.
Waxaan Bixineynaa Kaliya Macaamiisha Mareykanka KELIYA, dhammaan shixnadaha caalamiga ah MA LOO celin karo. Macaamiisha caalamiga ah haddii sheyga waxyeello ka soo gaadhay shixnad fadlan nala soo xiriir.
Haddii aad la kulanto wax arrimo ah oo ku saabsan amarka aad heshay, fadlan nagala soo xiriir email ahaan Sales @ schmidtSuuqa Christmas-ka.com. Si naxariis leh ku dar sawirka shayga (shayada) iyo sidoo kale sanduuqa aad ku heshay.
Beddellada waxaa loo soo saari doonaa codsiyada la soo gudbiyey 10 maalmood gudahood marka la keeno ka dib. Suuqa Kirismaska ​​Schmidt ma soo saari doono beddelaad intaas kadib.
Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt ayaa bixin doona kharashka soo celinta.
Soo Celinta Lacag celin
Waxaan bixinaa lacag celin qaabkii asalka ahaa ee lacag bixinta ilaa 10 maalmood kadib dhalmada.
Soo noqdaa 10 maalmood kadib dhalmada kadib
Waxaan bixinaa buundada dukaanka illaa 90 maalmood Ka dib Bixinta.
Dhammaan Soo Celinta / Lacag celinta waxaa lagu shaqeyn doonaa 10 maalmood gudahood laga bilaabo helitaanka sheyga (yada)
Haddii aad hayso wax su'aalo ah oo dheeraad ah ama walaac ku saabsan shuruudahaan, fadlan booqo annaga xarunta taageerada oo ku yaal degelkeenna ama si fudud nala soo xiriir Sales@schmidtchristmasmarket.com.